Mayelana NATHI - FOSHAN GOODTONE Furniture CO., LTD
UGoodtone ingenye yefenisha yamahhovisi yokudala ehamba phambili eChina. Sebenza nabaklami abaningi abadumile ezifuyweni nezangaphakathi ukuze wakhe uphawu lwesihlalo sehhovisi langempela elinethonya lomhlaba jikelele. IGoodtone isebenzisa ikhwalithi yefenisha nobuhle bokubukwa ukuthuthukisa inani lehhovisi futhi ikwenzele isihlalo sehhovisi esisebenzayo nesinobuhle.
UGoodtone igxile emkhakheni wefenisha yasehhovisi, inamathela ekwakhiweni kwasekuqaleni, ukukhiqizwa kwamaShayina, ifilosofi yebhizinisi lomhlaba jikelele, ngomklamo we-avant-garden, ikhwalithi enhle kakhulu, amanani entengo afanele kanye nensizakalo ephelele, emakethe yasekhaya nakwamanye amazwe ukuzuza idumela elihle!
Usihlalo wehhovisi likaGODODE, yenza umehluko!
Ngokuhambisana nezidingo zentuthuko eqhubekayo yezenhlalo, ezomnotho nezemvelo.Ifenisha yeGoodtone yasungulwa eFoshan, esifundazweni saseGuangdong ngo-2012. Iyinkampani yefenisha esencane neyamazwe omhlaba. Imikhiqizo ifaka phakathi imikhiqizo yesitulo yanamuhla. Ifektri itholakala eFoshan, Xiqiao.
Ukwenziwa ngokucophelela, insizakalo eqotho.Ifenisha yeGoodtone ibilokhu inamathela esimisweni "sokwenziwa ngokucophelela kanye nensizakalo eqotho" ukuhlinzeka ngemvelo enhle kakhulu yehhovisi emphakathini. Ukuze kuqinisekiswe ukuthi imikhiqizo yasefektri yenziwa ngobuhlakani.
Ukuze ube ngumkhiqizo wamazwe omhlaba wefenisha yasekuqaleni yaseChina.I-Goodtone Ngokuthuthukiswa kwe- "emisha" njengamandla okushayela angapheli okuthuthuka kwamabhizinisi, inethimba le-R & D eliqeqeshiwe elisencane nelinamandla futhi lithuthukise izinhlobo eziningi zemikhiqizo unyaka nonyaka. Ikhiqize uchungechunge lwemikhiqizo ethandwa futhi enconywa kakhulu emakethe, ethandwa ngamakhasimende. Ukuze emisha, siyohlale silondoloze umoya non-stop, ngesibindi futhi ubhekane namaqiniso, ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo emisha kanye eliphezulu.